आमा भन्दा सुन्दर ! अन्जु पन्तकी छोरी, हेरौं तस्विरहरु – चितवन मिडिया
आमा भन्दा सुन्दर ! अन्जु पन्तकी छोरी, हेरौं तस्विरहरु
नेपालको चर्चित गायिका एवं सुमधुर स्व`रको धनि अञ्जु पन्तको सुन्दरताको समाचारहरु बारम्बार आउने गरेको छ । नेपाली संगित क्षेत्रमा हिट गित दिन सफल उनै पन्तको छोरी भने मिडियामा खासै देखिन्नन् । मनोज शि`वाकोटिसँग वि`वाह बन्धनमा बाँधिएकि अन्जुको परितोसिका एकमात्र छो`री हुन् ।
शिवाकोटिसँग डिभोर्स भएपनि परिशोतिका भने आमासँगै बस्छिन् । उमेर सानै भएपनि परितोसिका शारिरीर बनावटमा आमा बराबर छिन् । एक अर्का कपडा समेत साटेर लगाउन थालेका छन् ।
अञ्जु भन्दा पनि बोल्ड लुक्स उनमा आइसकेको छ । अञ्जुको छोरीलाई नायिका बनाउने यो`जना छ । यसैले अहिले देखि नै अभिनय, नृत्य सिकाईरहेकी छिन् । उनीहरु साथी जस्तै छन् ।
छोरी परितोसिका पनि मामुका लागि श्रीमान् भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसैले उनी सहजै भन्छिन् । मा`मुले बिबाह गरे कुनै फरक पर्दैन । सक्ने भए त मा~मुको लागि श्रीमान् मै खो`जीदिन्थे । उनीहरु मज्जाले खुल्छन् । मनोज शिवाकोटिसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएपछि अञ्जुको विबाह गर्ने योजना भने खासै सुनिएको छैन ।
आज हामीले अन्जु पन्तकी छोरीका केही तस्विरहरु तपाइहरुसामू शेयर गर्दैछौं
धन कमाउन कोरिया पुगेका शुभराजको विदेशी भूमिमै दुःखद नि’धन हार्दिक श्रद्धाञ्जली